Golaha Aqalka sare oo ansixiyey Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha”Sawirro” | Bakool.net
Home / WARARKA DALKA / Golaha Aqalka sare oo ansixiyey Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha”Sawirro”
Golaha Aqalka sare oo ansixiyey Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha”Sawirro”
Waa kalfadhigii 4aad kulankiisa 5aad, waxaana shir guddoomiyey Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, iyaddoo Golaha Aqalka sare uu horyaalay Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha iyo samaynta Hay’adda Maareynta Biyaha Qaranka.
Guddoomiyaha Guddiga Kheyraadka, Kaabayaasha dhaqaale iyo Gaadiidka ee Golaha aqalka sare Sen. Ilyas Cali Xasan ayaa ka hadlay heerarka hindise sharciyeedkaan uu soo maray iyo wax ka badalka lagu sameeyay.
Senatarada qaar ayaa fikirkooda ku aadan dhinaca Qorista iyo sharciga waafajintiisa ka dhiibtay Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha iyo samaynta Hay’adda Maareynta Biyaha Qaranka.
Wasiir ku-xiggeenka Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Mudane Cismaan libaax Ibraahin ayaa senatarada u sheegay in hindise sharciyeedka ay ka muuqato in shaqo wanaagsan laga qabtay waajibkoodana ay ka gudateen, wuxuuna Golaha ka codsaday in ay ansixiyaan, maadaama Wasaaradda ay howlo uga xayiran yihiin.
Ugu dambeyn guddoonka Golaha Aqalka sare BFS ayaa ku dhawaaqay in hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha iyo sameynta Hay’adda maareynta Biyaha Qaranka Cod la galinayo.
Cod gacan taag ah ayaa loo qaaday, 29 Mudane ayaa ogolaatay ma jirin wax diiday iyo cid ka aamustay sida natiijada uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Golaha aqalka sare BFS Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Hindise sharciyeedka Kheyraadka biyaha iyo samaynta Hay’adda maareynta biyaha Qaranka ayaa horay waxaa u ansixiyay Golaha shacabka BFS, waxaa loo soo gudbiyay Golaha aqalka sare oo ansixiyay maanta..
Previous: Faah Faahin: Haweeney lagu dilay magaalada Baydhabo
Next: Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo warqad jawaab ah u diray Aqalka Sare (Akhriso)